Banyere Anyị - Chengdu Luxury Lighting Technology Co., Ltd.
Ìhè Linear Light LED
Ìhè Linear Light LED dị n'okpuru
N'ihu n'ihu-n'ịnyịnya ikanam Linear Light
Nke Na -adigide
More na -enwu enwu
Enwekwu Enyi na Enyi
Igwe ọkụ okomoko ChengduTeknụzụ Co., Ltd. guzobere na 2011 ma nwee ihe karịrị afọ 10 nke akụkọ ihe mere eme na ahụmịhe ọkụ. Mgbe ihe karịrị afọ iri nke mmepe na ihe ọhụrụ na-aga n'ihu, Luxury azụlitela mkpa nke ndị ahịa wee chịkọta ahụmịhe bara ụba na ngwaahịa bara uru, na-eme ngwaahịa anyị ka ọ dịgide adịgide, na-enwu enwu ma nwekwuo omume enyi. Gụnyere: Aluminom LED Linear light-back, Aluminom LED Linear light, Aluminium LED Linear light, ìhè U-ekara Aluminom LED Linear light, V-shaped Aluminum LED Linear light, bevel pụrụ iche Aluminom LED Linear light and ya mere. Ka ọ dị ugbu a, ọ bụrụla onye na-eweta ụlọ ọrụ arịa ụlọ ama ama na Chengdu (Vanke, Longhu, Longma Wood, Debei Furniture, wdg). Anyị nwere obi ike inyere ndị ahịa nọ n'akụkụ ụwa niile aka na -enye Aluminom LED Linear light solution adabara ha.
Otu ụlọ ọrụ ọkachamara zuru oke na -ejikọ R&D, mmepụta na ire ngwaahịa ngwaahịa ọkụ. Emi odude ke Chengdu, Sichuan Province, China. O nwere ebe nrụpụta 800 square na ndị ọrụ 100. Enwere ahịrị mmepụta tozuru oke yana sistemụ njikwa mma iji hụ na nchekwa ngwaahịa, ịdịte aka na nchedo gburugburu ebe obibi. Site na mmepe nke ụlọ ọrụ ahụ, anyị na-emeziwanye ike dị nro nke ụlọ ọrụ ahụ, ma na-agba mbọ ime ka ịre ahịa anyị, ịre ahịa, na mgbe ịre ahịa bụrụ ihe enyi na enyi. Ngwa anyị bụ isi kabinet Aluminom LED Linear light, ọkụ ụlọ ahaziri iche, gụnyere ọwa alloy aluminom ahaziri ka ọ dabara na gburugburu ngwa dị iche iche.
Gbado anya na mkparita uka maka mmepe ngwaahịa na injinị ụlọ ọmarịcha ọrụ mma na ụlọ ọrụ arịa ụlọ ahaziri iche.
A na-edobe ụlọ ọrụ anyị dị ka onye na-eweta ngwọta ngwaahịa, mkpa ndị ahịa miri emi, na-amalite site na nhazi ngwaahịa, nrụnye ngwaahịa, nkwa ngwaahịa, anyị na-enye azịza ọkachamara anyị. Kama ịbụ onye na -ebubata ngwaahịa dị mfe, ndị ahịa na oge na -agba àmà ike anyị.
Ebumnuche: Iji nye ngwaahịa na ọrụ ahaziri iche maka ụlọ ọrụ arịa ụlọ ahaziri iche.
Kedu ihe kpatara ịhọrọ ọmarịcha?
Reason 1: Ngwaahịa anyị na -ere bụ kpọmkwem ihe ndị ahịa chọrọ ịzụ; ihe karịrị afọ 10 nke ahụmịhe na kabinet mpaghara ọkụ, ka anyị nwee ọtụtụ ụdị ngwaahịa, ndị ahịa nwere ike họrọ Aluminom LED Linear Light nke dabara ha. Dị ka agbakwunyere, ogwe ọkụ dị warara nke ukwuu, mmetụ aka, mgba ọkụ swipe aka, wdg.
Reason 2: Dozie nsogbu onye ahịa; anyị nwere ọtụtụ ụdị ahaziri Aluminom LED Linear Light iji dozie nsogbu ndị ahịa
Reason 3: Họrọ ngwaahịa gị, onye ahịa nwere ntakịrị ihe egwu; ihe karịrị afọ 10 nke ahụmịhe na ụlọ ọrụ ọkụ, ndị otu mmebe mara mma, na ọrụ ịre ahịa zuru oke bụ isi ihe kpatara ndị ahịa ji ahọrọ anyị.
Ìhè dị nso n'ìhè eke, mee ka ìhè nke anya na -enweta dịkwuo mma ma bụrụkwa eziokwu.
Enweghị Nrụgide Nrụgide
Jiri bọọdụ sekit FPC nwere ihu abụọ iji hụ na eriri ọkụ nwere ike ibute ugbu a ma jikọọ na eriri ọkụ dị ogologo.
Enweghị Ọdịiche Agba
N'okpuru otu okpomoku agba, anyị na -ejikwa ọdịiche agba nke chaplet LED n'ime 3sdcm iji hụ na enweghị ọdịiche dị n'etiti agba dị iche iche nke Aluminom LED Linear Light nwere otu agba agba.
Enweghị Ọkụ Nwụrụ Anwụ
Nkwakọba nke chaplet ọkụ ọkụ LED chọrọ ka ejiri wires ọla edo na brackets ọla mee ihe iji hụ na ogo ọkụ ọkụ ọkụ LED, yana usoro nrụpụta dị elu na -ahụ na a na -agbachi chaplet ọkụ ma gbochie ọkụ nwụrụ anwụ.
Nkwụsị Ihie Dị Ala
Anyị na-eji klọọkụ LED dị elu nwere arụmọrụ dị elu, ọgbọ ọkụ dị ala, ire ọkụ na-enwu enwu, yana ire ọkụ dị ala iji hụ na ndụ ogologo oge nke ọkụ ọkụ LED.
Nrụpụta ọkụ dị elu
Anyị chọrọ ibe ọkụ ọkụ LED ka ha nwee arụmọrụ dị elu. Ịrụ ọrụ nke ọma ga-ebelata ọkụ ọkụ chaplet LED ma mee ka ọkụ ọkụ ọkụ na-azọpụta ọkụ.
Onye mmekọ ụwa niile
Tinye adreesị ozi -e gị ka ị nweta akụkọ igwe na ihe omume kacha ọhụrụ.